Barcelona Oo Lyon Ku Durdurisay Iyo Liverpool Oo Buyern Munchen Ku Ceebaysay Jarmalka Iyo Natiijada Kulamadii Ay Yeesheen
Thursday March 14, 2019 - 01:01:43 in News by G. Good
Kooxaha Barcelona Iyo Liverpool ayaa u gudbay wareega sideed dhamaadka ee tartanka kooxaha Yurub ee Champion League.
Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Buyern Munchen oo oo garoonkeeda ku ciyaaraysay ka dib markii ay kaga talaabsatay sadex gool iyo hal.
Kabtanka xulka qaranka Senegal isla markaana ka mid ah weeraryahanad ugu khatarsan kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa goolasha kooxdiisa furay ka dib markii uu daqiiqadii 26aad soo taabtay shabaqa kooxda Buyern balse daqiiqado ka dib ayey kooxda jarmalku la timid goolka barbar dhaca ka dib markii kubad la soo dhigay afaafka goolka Liverpool uu iska dhaliyey Joel Matip oo kooxda reer Ingiriis u dheela.
Kooxda Liverpool ayaan joojin dedaalkeeda waxaana u suura gashay in ciyaaryahanka khadka difaaca ka dheela ee Virgil van Dijk uu u dhaliyo goolka labaad markii ay ciyaartu maraysay daqiiqadi 69, iyada oo dhamaadka ciyaarta oo ku beegan daqiiqadii 84aad uu mar kale weeraryahanka Sadio Mane kooxdiisa Liverpool u dhaliyey goolka sadexaad, waxaana kooxda Liverpool u suura gashay inay u gudubto wareega 8 dhamaadka ee Champion League.
Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa guul fudud ka gaadhay Lyon oo marti u ahayd, ka dib markii ay kaga talaabsatay shan gool oo ay si xarago leh ugu dhufatay.
Ciyaaryahanada kala ah Lionel Messi oo laba gool dhaliyey, Philippe Coutinho, Gerard Pique iyo Ousmane Dembele ayaa kala dhaliyey goolasha kooxda Barcelona, halka gool madi ah oo kooxda Lyon la timid uu dhaliyey Lucas Tousart.